सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » दुवै हात नभए पनि खुटैको साहारा*मा डिग्री पास गर्ने..,यी युवाको लागि लाईक गर्नुस !
दुवै हात नभए पनि खुटैको साहारा*मा डिग्री पास गर्ने..,यी युवाको लागि लाईक गर्नुस !
नन्दराज भट्ट जन्मजात दुवै हातखुट्टा नभएको । शरीरमा हात र खुट्टाको कुहिनो*सम्मको आकार मात्र थियो । त्यसैले त उहाँका आमाबुवा*लाई आफन्त र छरछिमेकले त्यस्तो सन्तान पालेर के गर्छौ, खोलामा गाड भन्नेसम्मको सल्लाह दिए । जन्मिदा धेरैको हेयको पात्र बन्नु भएका तिनै नन्दराज अहिले भने अपाङ्गता भएका*हरुका लागि मात्र होइन, सपाङ्गहरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल हुनुभएको छ । कारण हो, दुवै हातखुट्टा नभएर पनि उहाँले गरिरहेको संघर्ष र प्राप्त सफलता ।
बेहाल छ जीवन, कथा म लेखुँ कसरी ? बादलभित्रको चन्द्रमा म देखुँ कसरी ? आँसुले भिजेको परेली बिझाइरहन्छ कताकता.,
कहिलेकाहीँ समसामयिक विषयमा पनि कलम चलाउने भट्ट अपाङ्गताको सवाल*लाई समेटेर लेखरचनाहरु पनि कोर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँले ‘बेलाको बोली’ विचार संग्रह प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ । अहिले आफ्नै जीवन चरितार्थ पुस्तक प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हातले, मुखले र खुट्टाले लेखेर आफ्नो जीवन कथा आधी जति लेख्न भ्याएको छु । छिटै प्रकाशित गर्ने सोच छ’, उहाँले भन्नुभयो । अपाङ्ग भएकोमा कुनै अफसोच र दुःख आफू*लाई नरहेको उहाँको भनाइ छ । नन्दराज भन्नुहुन्छ, ‘म अपाङ्ग हुनुमा मलाई कुनै दुःख छैन । बरु गर्व लाग्छ, मभित्र सबलाङ्ग व्यक्तिमा भन्दा फरक क्षमता छ ।’ अमेरिका नेपालबाट
जाडोमा रायोको सागले पुर्‍याउँछ यस्ता फाइदा..,जान्नुहोस् !
नेपालमा एशियाकै लामो र अग्लो झोलुङगे पुल..,कुन ठाउमा रहेछ हेर्नुस !
सपथ खाने र खुवाउने दुबै एउटै जेलमा..,पहिलो घटना नेपाली राजनीतिमा !
लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप बारे नायिका रेखा थापाले लेखिन् यस्तो कडा स्ट्याटस भन्छिन्…
महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्ने यी ५ परीक्षण ३० बर्ष पुगेपछि…
आज बिहिबारको राशिफल तालबाराही मन्दिरको दर्शन गरि पढ्नुहोस्
ट्राफिक प्रहरीले चोरी भएको स्कुटर चेकिङका क्रममा फेला परे पछी
नेपालले चिन्ता लिनुपर्दैन् भारतले निकालेको नक्शाबारे : महानिर्देशक प्रकाश जोशी
भारतीय नक्साको विरोधमा विप्लवले गरे आन्दोलनको घोषणा.,(विज्ञप्तीसहित)
“गो ब्याक इण्डिया” को नाराका साथ विरोध प्रदर्शन घन्क्यो काठमाडौंमा
कालापानी र लिपुलेक मिच्ने भारत*को बिरोध*मा भारतीय दूतावास घेराउ…
भोलि बिहिबारको राशिफल पशुपतिनाथको दर्शन गरि हेर्नुहोला
हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा कात्तिक २२ गते सार्वजनिक बिदा !